Ahoana ny fomba hanampiana ny fahafahanao misafidy ho mpiara-miasa amin'ny fivarotana fivarotana anao | Martech Zone
Aza omena ny masoivohonao mihitsy ny fahazoanao miditra. Betsaka loatra ny zavatra mety tsy mandeha rehefa manao izany ianao - manomboka amin'ny teny miafina very ka hatramin'ny fidirana amin'ny fampahalalana tsy tokony ananan'izy ireo. Ny ankamaroan'ny sehatra ankehitriny dia manana fomba hanampiana mpampiasa na mpiara-miasa amin'ny sehatr'asao mba hananan'izy ireo fetra voafetra ary azo esorina raha vantany vao vita ny serivisy.
Shopify manao tsara izany, amin'ny alàlan'ny fidirana ho an'ny mpiara-miasa ho an'ny mpiara-miasa. Ny tombotsoan'ny mpiara-miasa dia ny tsy anampiany ny isa ampiasain'ny mpampiasa manana lisansa ao amin'ny fivarotanao Shopify.
Amboary ny fidirana amin'ny mpiara-miasa Shopify
Amin'ny alàlan'ny default, ny olona rehetra dia afaka mangataka fidirana ho mpiara-miasa ao amin'ny tranokalan'ny Shopify anao. Ity ny fomba hijerena ny fikiranao.
Navigate ny Settings.
Navigate ny Mpampiasa sy fahazoan-dàlana.
Ho hitanao eto a mpiara-miasa faritra. Ny toerana misy anao dia afaka mandefa fangatahana mpiara-miasa na iza na iza. Raha te-hametra ny olona mangataka fidirana amin'ny mpiara-miasa ianao dia azonao atao koa ny mametraka kaody fangatahana ho safidy.
Izay ihany no ilaina! Ny fivarotanao Shopify dia natsangana mba handraisana fangatahana fiaraha-miasa avy amin'ny masoivohonao izay mety miasa amin'ny atiny, lohahevitra, fandaminana, fampahalalana momba ny vokatra, na koa fampidirina.
Mila hatsangana ny masoivohonao a Shopify Partner ary avy eo mangataka fidirana amin'ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny URL fivarotana Shopify (anatiny) tsy manam-paharoa sy ny alalana rehetra takian'izy ireo:
Raha vantany vao mandefa ny fangatahan'ny mpiara-miasa aminao ny maso ivoho dia hahazo mailaka ianao ahafahanao mijery sy manome alalana azy ireo. Raha vao ekenao ny fidirana amin'ny magazay dia afaka miasa izy ireo!
Tags: fidirana amin'ny masoivohompiara-miasaSyndicateshopifyMiaramiasa mpiara-miasaMiaramiasa ShopifyMiaraha mivarotraShopify mpampiasaVidio ny alàlan'ny mpampiasaMividiana mpivarotrafahazoan-dàlan'ny mpampiasa